Imakhaphu Yesiteshi Esisebenza Kakhulu Kakhulu
Izici » Umaki Wesiteshi
Faka umaki kuzintengo ezithunyelwa ku-OTA ngayinye nesikhulumi sokubhuka ukuze uthole inzuzo efanayo ngokubhuka ngakunye.
Abahlinzeki bokungenisa izihambi abanquma ukusabalalisa uhlu lwabo ngokusebenzisa amasayithi wesithathu ezimweni eziningi bagcina sebekhokha ikhomishini. Ngenkathi amanye amahhotela enganquma ukugwinya izindleko ezihambisanayo, abaphathi bokuqasha abanolwazi abangaphezulu kanye nabasebenza emafulethini asebesetshenzisiwe bangafisa ukwehlukanisa amanani abo esiteshini ngasinye ukwenza ikhomishini eyengeziwe egcinwe yi-ejenti.
Isibonelo, ngenkathi I-Airbnb kubiza kuphela ama-3% kubabungazi, I-Expedia ngakolunye uhlangothi ukhokhisa u-18%. Ukwenza umehluko kula mazinga ekhomishini, ababungazi abaningi bafisa ukufaka umaki ngesiteshi lapho besebenzisa umphathi wesiteshi.
Ingasiza Kanjani i-Channel Markup Channel?
Zeevou's Umphathi wesiteshi ikuvumela ukuthi ungeze umaki wesiteshi lapho uxhuma ama-OTA wesithathu nezinkundla zokubhuka. Ungangeza iphesenti noma inani elinqunyiwe ubusuku ngabunye ngesiteshi ngasinye, noma ungasebenzisa inhlanganisela yakho kokubili. Lokhu kuvumela ababungazi ukuba bathole inani elifanayo ngemuva kokubhuka ngakunye, kungakhathalekile ukuthi ukubhuka kuvela kuphi.
Ngenye indlela, usebenzisa i- Ukukhushulwa isici, abaphathi bangakwazi ukwehlisa amanani akhangisiwe kuwebhusayithi yabo ngenxa yemali ephakeme yenzuzo abakwazi ukuyenza ngemuva ukubhuka okuqondile. Ngaphezu kwalokho, uma ufisa ukukhawulela amakhasimende azosizakala ngalezo ziphulelo kubahlinzeki oqondile, ungakhipha amakhodi wevawusha izofakwa izivakashi ekuphumeni kwazo ukuze zizuze kulesi saphulelo.
Ukuze usize abaphathi abasebenza ezindaweni lapho kusebenza khona imithetho yezilinganiso, uZeevou usungule izici eziphathelene nokukwazi ukuphatha amapulani amaningi wamanani ohlobo olufanayo lweyunithi. Ngakho-ke ungasabalalisa ngokukhetha okunye kuwebhusayithi yakho yokubhuka eqondile, usebenzisa amagama athe ukwehluka ekubekweni ukuze ungahloni ngemikhawulo ebekwe yizivumelwano abanazo nama-OTA.